Rescuezilla 1.0.5.1: versiondị ọhụụ dị na Machị 2020 | Site na Linux
Rescuezilla 1.0.5.1: Ọhụrụ dị na Machị 2020
Nnapụta, nke a na-akpọbu "Redo ndabere na Iweghachite", bụ ngwa eserese eserese na a bootable «.ISO» usoro.
Nke na - eme ya sọftụwia ngwanrọ mfe iji maka usoro nnapụta, ebe ọ bụ na ọ na-enye arụmọrụ nke gụnyere zuru usoro nkwado ndabere na mpaghara, mgbake nke gburugburu sava anụ ahụ (Agba nkịtị), idezi nkebi, ihichapụ faịlụ, na-eme nchọgharị na weebụ, n'etiti ndị ọzọ.
N'ihi ya Nnapụta nwere ike ịmalite n'ụdị ọ bụla kọmputa (PC ma ọ bụ Mac) site na nchekwa nchekwa (USB ma ọ bụ CD / DVD), iji mezuo ebumnuche gị. Odi ka imeghe uzo ozo, dika Mmekọrịta y Akwa Ibom, ma site na ihe di iche nke odi mfe ma nwekwa obi uto kari kari ya na ihe ndi ozo kari ndia, ya na nke ndi ahia, dika Norton Mọ y Eziokwu Ezigbo Acronis.
1 Rescuezilla: Switzerland Army Knife nke Iweghachite Systems
1.1 General atụmatụ na functionalities
1.2 Mgbanwe na ụdị ọhụrụ 1.0.5.1 nke Rescuezilla
Rescuezilla: Switzerland Army Knife nke Iweghachite Systems
General atụmatụ na functionalities
Nnapụta na-ewere, a obere sistemụ mgbake ngwọta dị nnọọ elu, ngwa ngwa ma dịkwa mfe iji, ọbụlagodi maka ndị ọrụ kọmputa nkịtị, n'ihi atụmatụ na arụmọrụ dị na ya, dị ka:
Ọ dịghị nwụnye dị mkpa: Naanị ị ga-etinye ihe nchekwa (USB ma ọ bụ CD / DVD) nke nwere ya, buut ma weghachite usoro na usoro dị mfe.
Mbido ngwa ngwa na sekọnd: Amalite na ihe dịka 30 sekọnd, ma chọpụta akụrụngwa niile na akpaghị aka, na-eji obere ohere (RAM) na ihe onwunwe (CPU).
Mara mma ma na arụ ọrụ ọrụ interface: Akwadoro n'okpuru sistemụ arụmọrụ zuru oke (Ubuntu), nke na-enye ohere iji ngwa ndị ọzọ eme ihe mgbe a na-eme ọrụ mgbake.
Otutu nyiwe: O nwere ikike iji sistemu Windows, Mac na Linux rụọ ọrụ, nke mere na onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịchekwa ma weghachite sistemụ niile nke kọmpụta ha site na iji otu ngwa ọrụ ahụ.
Nkwado network: Iji nweta nchọpụta na ojiji nke netwọk draịva iji nweta oyiri na weghachite ọrụ enweghị isi nsogbu ma ọ bụ na-agaghị emeli.
Nweta Diski: Na-enye mfe ịnweta usoro faịlụ (nchekwa na faịlụ) maka ịchekwa akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Echefuola data mgbake: Ya mfe ma kensinammuo faịlụ mgbake ngwá ọrụ, na-enye ohere kpọghee ekwt na naghachi faịlụ akara dị ka ehichapụ iji zọpụta ha na draịva ọzọ.
Ndị ọzọ: Mfe Nweta Ntanetị, Tọgharia Factlọ Ọrụ Draịvụ, Mbanye nhazi Ngwaọrụ (Nkesa), na Nkwado Asụsụ Asụsụ (n'asụsụ dị iche iche) maka asụsụ ndị a: Bekee, French, German na Spanish.
Mgbanwe na ụdị ọhụrụ 1.0.5.1 nke Rescuezilla
N'etiti ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ na nke a version kwụsiri, ndị na-esonụ nwere ike ime ka ọ pụta ìhè:
Agbakwunyere na nkwado maka draịvụ ike NVMe
Mmezi nke njehie nke "weghachi nke ọma mana n'amaghị akụkụ" nke Redo ndabere
Ofu-eweghachiri nkwado ndabere na mpaghara kere dị iche iche unofficial Redo ndabere v1.0.4 mmelite
Ofu "araparawo na ederede ederede belụsọ n'iji nsogbu Nchekwa".
Ebe agbakwunyere ụdị maka draịva SMB / CIFS iji jikọọ njikọ netwọk ochie.
Gbakwunye igbepụla igbe nkwụghachi iji dozie ndabere nke ngalaba nwere ike iwepụ.
Ofu "Ọnọdụ Nchekwa" na French, atụgharịrị Spanish / Spanish (ES-es), ma dozie nsogbu ntụgharị asụsụ ndị ọzọ maka asụsụ dị iche iche.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Rescuezilla» nke bụ a magburu onwe ngwá ọrụ na-atụle «La navaja suiza de recuperación de sistemas», nke sitere na Machị 24 nke 2020 na a ohuru (1.0.5.1) jupụta n'ọtụtụ ozi ọma, ka ọ dị ukwuu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Rescuezilla 1.0.5.1: Ọhụrụ dị na Machị 2020
Ọ dị onye zitere ntụgharị asụsụ Spanish! Nwere ike ịhọrọ nke a na mmalite menu.
Biko rụtụ aka na ndị na-esonụ screenshots:
Zaghachi ka nyezzi
Cheers! Daalụ maka arụkọ oyiyi ...
Chrome 82 agaghị abịa, Chrome 83 ga-abụ nsụgharị ọzọ ka ewepụtara
Dijitalụ dollar: mkpuchi nke US iji kpalite akụ na ụba na ihu Covid-19